ကမ်ဘာပျေါတှငျနှင့်တူရကီနိုင်ငံက Metro | RayHaber
[11 / 12 / 2019] မြေအောက်ရထားဘူလ်ဂေးရီးယားမှာပိုကောင်းတဲ့လေကိုရှူမိပါလိမ့်မယ်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[11 / 12 / 2019] Başkentrayရထားအသုံးပြုမှုစစ်တမ်းကိုစတင်ခဲ့သည်	06 တူရကီ
[11 / 12 / 2019] Ekrem amomamoğlu: Kanal İstanbulဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း?	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[11 / 12 / 2019] သမ္မတSarı Arifiye Karasu ကမီးရထားလမ်းအတွက် Ankara Support ကိုတောင်းခံသည်	54 Sakarya
[11 / 12 / 2019] ရွေ့လျားမြန်နှုန်းမြင့်ရထား ၂ စီးအကြားမရပ်မနားခရီးသည်တင်	44 အင်္ဂလန်
ပင်မစာမျက်နှာလောကကမ်ဘာပျေါတှငျက Metro နှင့်တူရကီ
12 / 02 / 2015 လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ
ကမ်ဘာပျေါတှငျက Metro နှင့်တူရကီ: ကမ်ဘာပျေါတှငျက Metro နှင့်တူရကီ: လူဦးရေသိပ်သည်းမှုယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးမြို့၏ဗဟိုနှင့်လျှင်မြန်စွာမြို့ဆင်ခြေဖုံးမှမှတ်တိုင်များနှင့်မြေအောက်လျှပ်စစ်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ကြောင်းကြီးတွေမွို့၌ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မြို့တော်အသွားအလာမှထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်နှစ်ထပ်လိုင်းပေါ်တွင်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်မြေအောက်ရထားတွင်လှည်းအမြောက်အမြားကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်မားစွာရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်။ မြေအောက်ရထားကို ၀ န်ထမ်းအနည်းငယ်ဖြင့်သာစီမံနိုင်သည်။
ကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံးမြေအောက်ရထားလန်ဒန်မြို့တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Metro 1863 အကြောင်းကိုရှစ်သန်းခရီးသည်သယ်ဆောင်ဒီနေ့တစ်နေ့တာအတွက်ဒီနှစ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပဲရစ်မက်ထရို 1900 အတွက်တစ်စက်ယနေ့ထက်ပိုငါးသန်းခရီးသည်တစ်နေ့လျှင်သယ်ဆောင်။ ဥရောပတိုက်တွင်မြေအောက်ရထားနှင့်အတူအခြားမြို့များ; ဘူဒါပက် (1896), ဘာလင် (1882), ဟမ်းဘတ် (1912), လီနင်ဂရက် (1915), မော်စကို (1935), စတော့ဟုမ်း (1950), ဗီယင်နာ (1898), မက်ဒရစ် (1919), ဘာစီလိုနာ (1923), ရောမမြို့ (1955) လစ္စဘွန်း (1959), မီလန် (1962) ။
နယူးယောက်မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုယခုနှစ်အတွက်မြေအောက်လိုင်းများကူးပြောင်းခဲ့ကြသည် 1868 1904 အတွက်လမ်းများမှတဆင့်လေထုသွားတာနှင့်အတူဖွင့်လှစ်။ အမေရိကတိုက်ချီကာဂို (1892), Philadelphia တွင် (1907), ဘော်စတွန် (1901), တိုရွန်တို (1921) တွင်မြေအောက်ရထားနှင့်အတူအခြားမြို့များ။
ဂျပန် 1927 1933 အတွက်တိုကျိုနှင့်အိုဆာကာ, 1911 အာဂျင်တီးနားအတွက် Buenos Aires ရှိတစ်ဦးမြေအောက်ရထားတညျဆောကျခဲ့သညျ။ အဆိုပါက Metro ၏လေကြောင်းလိုင်းများမြေပြင်ကနေအမြင့်ဆုံးမှာအနည်းဆုံး6မီတာရှိလိမ့်မည်။ အိမ်ခေါင်မိုး, သတ္တုသို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်။ ဒါဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုကမြေပြင်ထောက်ခံမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ မြေအောက်လိုင်းများအတွက်လျှောက်ထားနှစ်ခုစနစ်များကို။ အခြား 6-8 မီတာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေစဉ်ပထမဦးစွာအညီ, အတိမ်အနက်ပဲလမ်းပေါ်မှာအဆင့် 35-40 မီတာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြခန်းမှတဆင့်သွားကြဖို့။ ပိုပြီးဈေးပေါပေါပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းမြေအောက်ရထားများကထွက်စေတော်မူ၏။ သူတို့ကလမ်းအဆင့်ကိုပြခန်းနက်ရှိုင်းသောတုတ်ကျင်းဆီသို့ဦးတည်တူးဖော်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးခဲ့ကြသောကြောင့်, တုတ်ကျင်း built ကွန်ကရစ်နံရံ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်တူးနေသည်။ ထို့ကြောင့်ပြခန်းအာကာသပြီးနောက် rectangular Prism ကိုပုံသဏ္ဍာန်ကနေတစ်ဆင့်ပိတ်ထားသည်နှင့်လမ်းများကျော် tiled ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦး elongated, စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအထစ်အတွက်တစ်လမ်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်၏ဒီနည်းလမ်းရဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်။ လတ်အတွက်တူးဖော် 6-8 မီတာအတိမ်အနက်ကိုနှစ်ဆလိုင်းအဖြစ်ဖန်ဆင်းထားသည်ဘဲဥပုံအသွင်သဏ္ဌာန်ပြခန်းရိုးကိုညွှန်ပြ။ ကွန်ယက်အတွက်နက်ရှိုင်းသောလိုင်းများလမ်းများ၏အဆင်အပြင်အတိုင်းလိုက်နာပါဘူး, အများအားဖြင့်ကမှန်ကန်သောလိုင်းပါဝင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အခြားတစ်ခုကနေသွားကြဖို့အမှတ်နှစ်ခုကြားရှိအလွန်တိုတောင်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာပြခန်းယင်းပတ်ပတ်လည်ကွန်ယက်တွင်ထွင်းထုထားသည်။ တစ်ခုတည်းလိုင်းသူတို့ကိုဖြတ်သန်း။ ဤအပြခန်း 3,5-4,5 အကြား cross-section အချင်းစက်ဝိုင်းသံမဏိကွင်းတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးမီကသို့သော်ကွန်ကရစ်ထံမှ prefabricated နှင့်သံမဏိလက်စွပ်တစ်ခင်းမှုစနစ်အတူတကွလွဲချော်သွားတာစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်အစားထိုးထားသည်။
ray အားလုံးနီးပါးအဖွင့် (1435 မီလီမီတာ) တွင်စံဖြစ်ပါတယ်။ နက်ရှိုင်းပြခန်းထဲမှာမနှစ်ဆလိုင်း။ နှစ်ခုပြခန်းနားမှာဘက်ရှာတွေ့ခြင်းနှင့်တဦးတည်းဦးတည်ချက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရထားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဖွင့်လှစ်။ သွေဖီ, မှတ်လှည့်တစ်ဦးတည်းဘူတာရုံမှာရှိပါတယ်။ လိုင်းများဆုံမှတ်ဘယ်တော့မှနေကြသည်။ ပြခန်း၏မြေအောက်ကွန်ယက်၏ချဲ့ထွင်နဲ့အတူဘူတာ, ခေါင်မိုးလုပ်ပေမယ့်လေကြောင်းကွန်ရက်ကပလက်ဖောင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်နေစဉ်။ ဘူတာ 100 160 မီတာရှည်လျားပလက်ဖောင်းကုန်ကျစရိတ်တပ်ဆင်ထားကြသည်။ ခရီးသည်စက်လှေကားတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေသောအချိန်အများစုကိုအဆိုပါညမထွက်ရအမိန့်။ ရထားလျှပ်စစ်ရထားကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြသည်။ အများအားဖြင့်နှစ်ဆ Rectifier ။ ရထားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အရေအတွက်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ်နာရီမြေအောက်ရထားနှုန်း 90-100 ကီလိုမီတာများသောအားဖြင့် 60 ကီလိုမီတာထက်ကျော်လွန်မထားဘူးဆိုရင်။ တဦးတည်းဦးတည်ချက်အတွက်တစ်နာရီကို 20 ရထားရွေ့လျား။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကိုလည်းလန်ဒန်မြေအောက်ရထားထဲမှာဖြစ်သကဲ့သို့ 40 တစ်နာရီအထိရှိနိုင်ပါသည်ထပ်ပြောသည်လိမ့်မယ်။
နယူးယောက်-အမေရိကန်: နယူးယောက်တိုင်းကားတစ်စီးလူအနည်းငယ်ကသာရှိပါတယ်။ ယာဉ်ရပ်နားသည်ရွှေကဲ့သို့အမှုအရာတို့ကိုရှာတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှာတွေ့လည်းအလွန်နည်းသည်အချိန်ဖြစ်ပါသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ 1904 28 ခုနှစ်တွင်ရုံဘူတာရုံပိုင်ရှင်များအားဖြင့်မြေအောက်ရထားဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ယခု 462 4.9 လူဦးရေသန်းနေ့ကိုသယ်ဆောင်။ ထို့အပြင်ယခုနှစ်ရဲ့ Metro နေ့က 3657/ 24 နာရီ။
လန်ဒန်အခြေစိုက်အင်္ဂလန်: လန်ဒန်မြေအောက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်သက်တမ်းအရှည်ဆုံးမြေအောက်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမြေအောက်ရထားယခုကီလိုမီတာလိုင်းပေါ်တွင်တစ်နှစ်လျှင်စုစုပေါင်းရဲ့ 1863 405 268 ဘူတာရုံများတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 976 လူဦးရေသန်းတစ်နေ့ကလန်ဒန်မြို့တွင်နေရာအရပ်မှသွားကြဖို့မြေအောက်ရထားကိုအသုံးပြုပါ။
ပဲရစ်-ပြင်သစ်: ပဲရစ်မက်ထရို, ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး2။ ဒါဟာမြေအောက်ရထားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာမက်ထရိုအားဖြင့်ပဲရစ်မှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအမှတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ 214 380 ကီလိုမီတာလိုင်းမလိုဘဲတစ်ဘူတာရုံမှာမြေအောက်ရထားကိုချွတ်ရနှင့်သင်ရုံဘူတာရုံ 500 မီတာလမ်းလျှောက်သည့်အခါလိုအပ်သောကိုလည်းအကောင်းဆုံးမက်ထရိုဧရိယာအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။4လူဦးရေသန်းတစ်နေ့ကမြေအောက်ရထားအားဖြင့်ပို့ဆောင်နေကြသည်။
မော်စကို - ကမ္ဘာပေါ်တွင်အချိန်အတန်ဆုံးမက်ထရိုစနစ်အဖြစ်လူသိများသောမော်စကိုမက်ထရိုသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ရက်တွင် 8.2 လူသန်းပေါင်းများစွာကိုသယ်ဆောင်သည်။ မော်စကိုမက်ထရိုတွင် 290 km လိုင်းရှိ 172 ဘူတာရှိသည်။ ဒီမြေအောက်ရထားအများစုဟာမြေအောက်ကနေစီးဆင်းသွားပေမဲ့၊ အပိုင်းအစငယ်တစ်ခုဟာတံတားကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမော်စကိုနဲ့ယူဇားမြစ်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ရှုမြင်ပုံကိုနေ့စဉ်စွဲမက်စေတယ်။
Montreal - Canada: Montreal Metro ကို 1966 တွင်ပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 60 ကီလိုမီတာရှည်သော 68 ကီလိုမီတာရှည်သောမက်ထရိုဘူတာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်လျားဆုံးသောမက်ထရိုမဟုတ်သော်လည်း၎င်း၏ခေတ်သစ်တည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးမက်ထရိုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ 835.000 သည်တစ်နေ့လျှင်လူများကိုသယ်ဆောင်သည်။
မက်ဒရစ် - စပိန် - မက်ဒရစ်မက်ထရိုသည်ဥရောပ၏ 2.ci နှင့်ကမ္ဘာ၏ 6.ci ဖြစ်သည်။ မက်ဒရစ်မက်ထရိုကို 1919 တွင် 3,3 km လိုင်းနှင့် 8 ဘူတာဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး 231 ဘူတာသို့တိုးခဲ့သည်။ မက်ဒရစ်မြေအောက်ရထားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုပ်အများဆုံးသောမြေအောက်ရထားတစ်စီးဖြစ်ပြီး 1.8 သည်တစ်နေ့လျှင်လူ ဦး ရေသန်းပေါင်းများစွာကိုအသုံးပြုသည်။
တိုကျို: တိုကျိုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတိုင်းပြည်များတွင် 10.6 လူဦးရေသန်း, တစ်နေ့လျှင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, 7.7 လူဦးရေသန်းမြေအောက်ရထားကိုအသုံးပြုပါ။ စုစုပေါင်း 287 မက်ထရိုဘူတာတိုကျိုမြို့ရှိတည်ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘူတာရုံအင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျပန်ကြေညာချက်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးလ် - တောင်ကိုရီးယား။ ဆိုးလ်မြေအောက်ရထားဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8 လူ ဦး ရေသန်းသည်ဤမက်ထရိုကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုကြသည်။ 287 သည်ကီလိုမီတာရှည်သောကမ္ဘာပေါ်ရှိအရှည်ဆုံးမီထရိုဘူတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရထားအများစုမြေအောက်သွားပေမယ့်% 30 ကမြေပြင်ကိုကျော်သွားတယ်။
Beijing - China: ပေကျင်းမြေအောက်ရထားကို 1969 တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒီမြေအောက်ရထားနဲ့အတူတရုတ်လူမျိုးတွေဟာပေကျင်းမြို့အပြင်ဘက်မြို့တွေကိုအလွယ်တကူသွားနိုင်ပါတယ်။ 2008 ပေကျင်းအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမတိုင်မီတွင်၊ 7.69 ဘီလီယံဒေါ်လာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဤမြေအောက်ရထားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးလက်ရှိမြေအောက်ရထားကို 480 ကီလိုမီတာserviceရိယာတွင်စတင်အသုံးပြုသည်။ တစ်နေ့လျှင် 3.4 လူသန်းပေါင်းများစွာအသုံးပြုသောဤမြေအောက်ရထားကိုတရုတ်ပြည်၏လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြေအောက်ရထားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ဟောင်ကောင်: အခြားမြို့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဟောင်ကောင်ဘယ်လောက်အသီးအသီးမြေအောက်ရထားစနစ်, 90 လူဦးရေသန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်တိုတောင်းသောအကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ 3.8) တွင်တစ်ရက်မြေအောက်ရထားကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုသော်ငြား။ လူအများစုဟာဒီမျိုး9နှင့်အတူကမ္ဘာ့မြေအောက်ရထားစီး။ , အဆိုပါနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ပြွန်ယခုနှစ် 1979 အတွက်ဗြိတိန်တို့ကဖန်ဆင်းသည်။
စုစုပေါင်းမြေအောက်ရထားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည် LRT 1908 စုစုပေါင်းမော်တော်ယာဉ်လေလံထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးတစ်နေ့လျှင်သန်း 2013 2.5 အကြောင်းကို၏အဆုံး၏အဖြစ်ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 2023 7000 မြေအောက်ရထားနှင့် LRT အကြောင်းကိုတိုင်အလင်းရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးသည်အထိလိုအပ်နေပါသည်။ ကြမ်းပြင်ယူတံ့သော 20232နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမှရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုတက်; တိုင်းပြည် 26 တထောင်ကီလိုမီတာယေဘုယျအားဖြင့်မီးရထား၏တထောင်ကီလိုမီတာလည်းအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းများဖန်တီးပါလိမ့်မယ် 10 ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ 2023 ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ, မြို့ပြရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များနှင့်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်နေ့စဉ်ခရီးသည်အရေအတွက်ကတန်ချိန် / တစ်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်သန်း 4.1 200 မှထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါ 200432023 %% ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး၏ rate နှင့် xnumx't% ရာနှစ် 10 5.5% အတွက်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းကိုကြောင့်ကုန်တင်နှုန်းမှာပါ။
ဗလီတူရကီအတွက်လေဆိပ် xnumx.kez ပြုနေပါသည်
တူရကီအတွက် Bursadaki ဒေသခံအစိုးရခေါင်းဆောင်
ဝန်ကြီးချုပ်Yıldırım: ယနေ့တူရကီလေကြောင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ် ...
Zapatero: irse အကယ်၍ သင်ဟာကမ္ဘာ့မြို့တော်တစ်ခုကိုရွေးဖို့လိုအပ်ရင်…
ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ပထမဦးစွာအချိန်များအတွက်မြို့တော်! ဝန်ဆောင်မှုတွင် 'Stop တူရကီ
Kemal Demirel သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောလမ်းလျှောက်သောရထားလမ်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးရထားလမ်း…
Triple Run စစ်ဆင်ရေးကို US အပြင်ဘက်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်
တူရကီနိုင်ငံအဘယ်သူမျှမ Applications ကိုနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံအများအပြားမှာတော့ ...
Buenos Aires မြေအောက်ရထား
Irmak - Zonguldak လိုင်း Alibeyler - Tüney - Karaşıhမူကွဲစီမံကိန်းတင်ဒါလေလံပြင်ဆင်နေ၏ÇankırıYakınkent OSB မီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်းစီမံကိန်းစုဆောင်းခဲ့ကြ
အဆိုပါ Kayseri-OSB ဓါတ်ရထားလမ်းကြောင်းတောင်တက်အတွက်Düvenöစတင်
İSİBKEKE Mobile Application သက်တမ်းတိုးသည်
သမ္မတSarı Arifiye Karasu ကမီးရထားလမ်းအတွက် Ankara Support ကိုတောင်းခံသည်